Amafutha kanye neNkampani Inkampani Yabasebenzi Ikamu Labakhiqizi & Abahlinzeki - China Amafutha kanye negesi Inkampani Yenkampani Lab Camp Factory
ILida Integrated Camp House isetshenziswa kabanzi ngenhloso yezabasebenzi neyezempi kumaphrojekthi Wenkontileka Jikelele, amaphrojekthi wensimu ka-Oyili negesi, Amaphrojekthi we-Hydroelectric, amaphrojekthi wezempi, amaphrojekthi wemikhakha yezimayini, njalonjalo, enzelwe ukugqugquzela indawo yesikhathi esifushane nesikhathi eside.
Indlu yekamu labasebenzi bakaLida eyakhiwe ngabakwaLida iyasabeka futhi yenzelwe ngokukhethekile ukuhlinzeka ngokusetshenziswa okuphezulu nokunethezeka. Abakhiqizi bekamu labasebenzi bakwaLida abangahlinzeka ngezixazululo zezindlu zabasebenzi besikhashana ezisheshayo, ezilula, ezingabizi futhi ezonga amandla.
Indlu yesitsha sephakethe le-LIDA ingathunyelwa ihlanganiswe noma ukugcina izindleko zokuhamba zibe sezingeni eliphansi, kuhlinzekwe kugcwele phama ukufakwa esizeni ngobuncane bamathuluzi. Indlu yesitsha sephakethe le-LIDA nayo ingahlukaniswa kalula ngemuva kokuyisebenzisa futhi idluliselwe endaweni entsha.